Iye Kristu wekudenga, anozivisa chiratidzo kana chiratidzo? - Afrikhepri Foundation
Lvarume vakachenjera, vakadzidza nezvekuzvarwa kwaJesu, vanouya "kubva kuMabvazuva" vachitungamirirwa nenyeredzi (Sirius) kuzopa rukudzo "kuna Mambo wevaJudha" uyo achangobva kuzvarwa muBheterehema. Saka heano madzimambo matatu naSirius, nyeredzi inopenya mudenga. Ivo vese vari kuenda kunzvimbo yekubuda kwezuva musi waZvita 25. Ichi ndicho chikonzero madzimambo matatu anotevera nyeredzi iyi kumabvazuva: kutsvaga nzvimbo yekubuda kwezuva, kuzvarwa kweZuva. Mhandara Maria anomiririra boka renyeredzi reVirgo, rinozivikanwawo seMhandara Mhandara. Virgo muchiLatin zvinoreva Virgo. Virgo inotaurwa zvakare patinotaura nezve "imba yechingwa" mumiriri weVirgo imhandara yakabata nzeve yegorosi. Iyi imba yechingwa uye chiratidzo chegorosi chinoenderana nemwedzi waNyamavhuvhu naSeptember, nguva yekukohwa. Panguva imwecheteyo, Bheterehema rinogona kushandurwa chaizvo se "imba yechingwa". Bheterehema saka rinoreva boka renyeredzi reVirgo chinzvimbo mudenga kwete paPasi.
Chimwe chinonakidza chiitiko chinowanikwa panosvika Zvita 25, kureva panguva yechando solstice. Kubva panguva yezhizha kusvika panguva yechando mazuva acho anova mapfupi uye anotonhora. Kubva pakuona kweKuchamhembe Hemisphere, iro Zuva rinofambisa kufamba rakananga kumaodzanyemba, rinova diki uye rinowedzera kushomeka. Kupfupiswa kwemazuva uye kupera kwekukohwa sezvo mwaka wechando wakaswedera wakafananidzira maitiro erufu kune vekare.
Kwaive kufa kwezuva.
Nekudaro, muna Zvita 22 kufa kweZuva kwakapedzwa zvizere. Sezvo Zuva rave kufamba richienderera kwemwedzi mitanhatu, rinosvika pakadzikira kwazvo mudenga. Kusvika padanho rino chinhu chinodakadza chinoitika: Zuva rinomira richienda kumaodzanyemba, izvi zvinoonekwa kanenge kwemazuva matatu. Pakati peaya mazuva matatu ekuzorora, Zuva rinoramba riri padyo neSouthern Cross, inonzi zvakare boka renyeredzi reMuchinjikwa. Kutevera ino nguva yenguva, muna Zvita 6, Zuva rinofamba nhanho imwe, ino nguva kuchamhembe iyo inoratidzira mazuva marefu ekupisa uye chitubu.
Saka zvakanyorwa kuti: mwanakomana akafira pamuchinjikwa akafa kwemazuva matatu, kungozomutswa uye nekuzvarwa patsva. Ichi ndicho chikonzero Jesu nevamwe vanamwari vezuva vane zvakafanana nekurovererwa, kufa kwemazuva matatu uye pfungwa yekumuka. Inoenderana nenguva yekushandurwa kweZuva risati ratora nzira yakapesana kuenda kuchamhembe kweHemisphere kana ichiunza chitubu uye hupfumi
Christos Iesous Akazvarwa muBheterehema (imba yechingwa) kumhandara (boka remhandara rinomiririrwa nemukadzi akabata nzeve yegorosi.) Akazvarwa panguva yehove. (Chiratidzo chevaKristu vekutanga) akafira muchinjikwa (kwemazuva matatu ekuzorora, Zuva rinosara padyo neSouthern Cross, inonzi zvakare boka renyeredzi reMuchinjikwa.) ane vadzidzi gumi nevaviri, madzitateguru gumi nemaviri, madzinza gumi nemaviri eIsraeri. (12 mapoka enyeredzi ezodhiac).
JESU-KRISTU "IZUVA RAMWARI"
"Zviri kumusoro zvakafanana nezviri pasi", "Anonzwisisa ngaanzwisise"
Tarisa Mukadzi Wamufundisi (1996)
Kenya neGoogle kuisa dzose dzeAfrica tsika dzekugara paIndaneti